Inona ny Black Hat SEO? & Ndash; Ny fotokevitra SEO amin'ny Semalt
Inona ny Black Hat SEO? - Ny fotokevitra SEO amin'ny Semalt
Ao amin'ny tontolon'ny SEO (Search Engine Optimization), manam-pahaizana dia mampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fanao amin'ny Black Hat SEO. Fa, inona ny Black Hat SEO? Miresaka momba ny fomba fanao SEO izay manitsakitsaka ny fitsipiky ny Webmaster Google. Toy ny fikarohana , Google dia nametraka torolàlana amin'ny webmasters ho an'ny SEO azo avaozina sy izay tsy azo ekena amin'ny sehatra SEO. Google dia mampiasa ny motera fikarohana mba hamoronana ny fitsipika rehetra hitany sy ny fanitsakitsahana ny toro-lalana voafaritra izay mahatonga ny fanesorana tranonkala iray avy amin'ny Google. Noho izany, ny manam-pahaizana SEO dia mety hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fikarohana, izay tsy fanao ratsy. Google dia mikendry ny hitady toerana rehetra ary mamaritra mazava tsara ny votoatiny na ny momba izany. Na izany aza, ny orinasan'i Google dia ny mamaritra ny tranonkala miavaka indrindra hikaroka.
Manazava i Jack Miller, Semalt Mpitarika Success Manager, fa raha manana tranokala momba ny voninkazo marefo ny mpandrindra iray, Google dia mamporisika ny fanatsarana ny tranonkala toy izany miaraka amin'ireo teny mozika tropikaly.
Black Hat SEO fampiharana
Amin'ny ankapobeny, ireo fomba fanao amin'ny Black Hat SEO dia misy ifandraisany amin'ny tetikady na tetika fanamafisam-peo handikana fitaovam-pikarohana toa an'i Google hijerena tranonkala iray ho zavatra tsy mitovy amin'ny tena izy. Ireto manaraka ireto dia ohatra amin'ny Black Hat SEO:
Fividianana rindran-damina na fanolorana vola vola ho an'ny backlinks (anisan'izany ny famatsiam-bola ho an'ny rohy)..
Link pyramids - fananganana rohy maro mba hanomezana rohy amin'ny tranonkala hafa.
Mampiditra lahatsoratra miafina ao amin'ny pejin'ny tranonkala iray, izay ahitana soratra bitika kely mifototra amin'ny teny fanalahidy, teny tsy hita sy loko mitovy loko toy ny fototra.
Fananganana tranokalan'ny vavahady. Ireo dia mifandraika amin'ny rohy mikendry ny hisarihana ireo fitaovam-pikarohana alohan'ny handefa ireo mpampiasa amin'ny tranonkala samihafa.
Ny fampiasana ny server proxy na ny famoahana adiresy IP am-polony maro mba hahatonga tranonkala iray dia tahaka ny tranonkala maro mba hahazoana rohy.
Mametaka votoaty avy amin'ny vohikala hafa mba hahatonga azy ho diso hevitra fa misy tranokalam-baovao marobe sy votoaty.
Ny loza ateraky ny mainty SEO SEO
Misy loza roa mety hitranga ao amin'ny Black Hat SEO. Ny voalohany, Google dia miara-miasa amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana mba hanafoanana ny fomba fanao amin'ny Black Hat SEO. Manamafy ireo manam-pahaizana fa efa nahazo fahombiazana tamin'io asa io i Google. Noho izany, mety ho lany tamingana ny tranokalan'ny Black Hat SEO.
Ny loza fahatelo sy farany dia tsy dia zava-mitranga loatra, fa loza hafa. Rehefa mametraka tranonkala iray mampiasa ny Black Hat SEO i Google, dia afaka manapa-kevitra izy ireo fa hametraka ny filahatry ny habaka na hamongotra tanteraka ny tranonkala. Tranonkala iray tsy misy dikany dia tsy hiseho mihitsy amin'ny lalao Google mihitsy.
Ny tombony amin'ny fotsy SEO SEO
Ny tranonkala dia afaka manangana fahefana sy tanjaka amin'ny fampiasana fotoana amin'ny tetikasa White Hat SEO izay ankasitrahan'ny milina fitadiavana. Ny tranonkala iray dia hitsangana amin'ny tsimok'aretina tsikelikely fa hitazona ny hasina nahazoany.gs. Ny SEO ao amin'ny tranonkala dia hanangana koa avy amin'ny fomba fanao SEO taloha fa tsy hanomboka indray mandeha isaky ny fotoana. Farany, tranonkala iray dia mety hahatratra ny haavon'ny valin'ny fikarohana biolojika ary mifantoka amin'ny fiarovana ny SEO. Ankoatr'izany, ny fihazonana ny laharana ambony (azo tanterahina ara-dalàna) dia asa be lavitra noho ny mahatratra ny laharana voalohany Source .